Training – Purple Feminist Group
Gender Education Training
Trained over 500 young girls and boys on feminism, consent, SRHR, and gender across Myanmar. In July 2018, PFG gave Youth Leadership training in Yangon at Y.W.C.A to young girls and boys who have just finished their matriculation exams.In September 2018, PFG was invited to givea3 days workshop on CEDAW & gender by Shan State Women’s Organization (SSWO) in Wan Hai Village.
In Mansam village, PFG provided workshops on self-defense, SRHR education, gender, and violence topics with adolescent girls.In 2020, we delieveredatwo day feminist workshop in Sagain University of Education with soon-to-be teachers.This is huge for Purple Feminist Organization becausealot of the time, we turn think that gender training causes participants becoming one-sided thinkers of and for women.We wanted to make sure participants think both of men/boys and women/girls because this is our reality. Our reality is that there arealot of men who want to cry and have to hide their emotion or turn it into something manly so that our society can accept. And this isaviolation of freedom of expression.
That is as important as women having the choice do whatever they want.
We matter. We both matter equally and that’s it.
A huge shout-out to Shan State Women’s Organization for their invitation and collaborations.
Purple Feminists ရဲ့ Founder မနန္ဒာ နှင့် အတူ အခြားဖီးမီးနစ်များ ဖြစ်သော မအေးသီရီကျော်၊ ဒေါက်တာ သက်စုထွေး၊ ဒေါက်တာ ဖြိုးသီဟကျော် နှင့် မပြုံးသက်သက်ကျော်တို့သည် ဘုန်း ခေါင်းစဉ်ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်သော campaign ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့ကြပါတယ်။
“ဘုန်း” ဆိုသော အယူအဆသည် မြန်မာပြည်တွင် ကျား၊မ မညီမျှမှု အလေ့အကျင့်များကို ဖြစ်စေအောင် တွန်းအားပေးလျက်ရှိပါသည်။ ယောကျ်ားလေးများက အမျိုးသမီးများထက်ပိုမြင့်မြတ်ကာ ဘုန်းရှိသည် လူအများက ထင်နေကြပါသည်။ ထို့ကြောင့်ပင် အမျိုးသမီးများသည် နိမ့်ကျသည်ဟု ယူဆကြကာ ဒုတိယတန်းလူတန်းစားအဖြစ်ဆက်ဆံခံနေကြရသည်။
ယခုကမ်ပိန်းတွင် လူသားတိုင်းသည် သာတူညီမျှဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပြီး တူညီသော လေးစားမှုရရှိမည်ကို အသိအမှတ်ပြုပါသည် တပြိုင်နက်တည်းမှာ အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး မည်သူ့ကိုမဆို ဒုတိယတန်းစားလူသားအဖြစ် မဆက်ဆံသင့်ကြောင်းကို သတင်းစကားပါးလိုပါသည်။
ကျား၊ မညီမျှမှုကို လိုလားသူမည်သူမဆို ယခု ကမ်ပိန်းတွင်ပါဝင်ကာ မညီမျှမှုဖြစ်နေစေသော အလေ့အကျင့်များကို ပြောင်းလဲရန်အတွက် ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။